Dukubni karona vayrasii kuta Iowa keessatti namaa haga 179 gahe jiraa | KWIT
Dhukubaa Kanaan namnii harawnii qabamee magallaa Sioux County tittii. Kuniis namaa umrii gudatii, wagaa 60 hagaa 80 tti. Salii namaa kanaa hinbekamuu.
Kutaan Nebraska kessatii qoranaan dhukuba kaana Kibxataa Bray Health kaan magala Linconln kessatii argamuu egalamee jiraa.
Harra bakka oduu himamu iraa, Bulchaan magala Pete Rickets akkaa jedhanitti, qornmanii kunii bakka ittii godhama jiruu, manaa yalla Life Point kaan jedhamu magalaa South Linconln tii. Manii yalaa kunii guyattii namotaa hagaa 60 qorachuu nii dandayaa. Akasumaas guyaa 7 torbaan kesati, sa’aati 4 guyatii sa’aa bodaa banama. Garuu karaan yalii kanaa kaan godhamuu yoo doctoriin namaa ajajee qofadhaa.
Dalagtotnii Kuta Iowa hagaa 10,000 dalagaa isanii dhabanii jirruu. Akaasuma umanii dalaga dhunfalee akaa chufaan ajajaamanii jiraan sababaa dhukubaa kanatiif jechaa.
Misoomsi dalagaa kuta Iowa ykn Iowa workforce Development akaa himanitii namota 42,000 olituu hojii dhaburaa kaan ka’ee ykn unemployment kaan jedhamu gutaatani jiruu dhumaa torbaan March 21 irattii. Harkii gudaan namaa kanaa gutatee umaata mana nyataa ykn waan nyatamuu waliin dalaguu. Qoranaa kesssaatii akaa argamee harkii 80 dalaydotaa manaa nyataa kessa dalagaa dalaguu gadii dhisuu muldhisaa.
Lottery ilee gadii bu’aa demutii jiraa, sababaa dhukubaa karonaa vayrasii gatiin gadii bu’un umanii lottery qophesaan akanaa jedhuu. Harbaa galgalaa bakka taphaa lottorytii gatiin lotorii qixeen gadii hir’aataa. $40 miliiyena iraa $20 miliyena debi’ee, hergaa gatii gudichaan hinjifataan bodaa. Sabibaa kanaa lotoriin Jackpot jedhamulee sutaa gudataa, yoo akaam gudatee $2 milliyon dabalaa,waan qaraa silaa $10 miliyoon dabaluraa.
Botawaan biraa ilee kaa lotorii qabaan waanuma tokko iraa akaa jiraan ibsanii jiruu Amerikaa kesatii yoroo amaa. Sochiin Powerball jedhamuu garuu mallaqaa amaa hijifataan $160 mili’on Jackpot hin midhuu jedhanii jiruu.
Week of March 23, 2020: Coronavirus Briefings At The White House
By Mark Munger • Mar 23, 2020